संसद विघटनको निर्णयले संवैधानिक ‘कु’भयो, सविधानको हत्या भयो भन्ने कोलाहल निरर्थक, ताजा जनादेश उपयुक्त : कमल थापा
बाहिरको कुराले हामी प्रभावित हुन्नौंः प्रधानन्यायाधीश
अर्को सूचना जारी नभएसम्म प्रदेश नं १ को प्रदेशसभा बैठक स्थगन
डा बाबुराम भट्टराईलाई करिश्मा मानन्धरको प्रश्नहरुको झटारोः अर्को पार्टीको विरोधमा मात्रै सिमित भएको देखेर दुःख लाग्छ डा साब !
काठमाडौँमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको वृहत मोटरसाइकल र्‍याली
पार्टीभित्रको विवादमा संसद् विघटन भएको भन्दै पुर्नस्थापनाको फैसला गर्न अधिवक्ता ज्ञवालीको माग
डा. भट्टरार्इले दिए सडक संघर्षकाे चेतावनी
काठमाडौँ । भ्रष्टाचार, महिला हिंसा, हत्या र बलात्कार लगायतका घटना नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सडक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका संयोजक भट्टराईले काठमाडौँमा बुधबारबाट शुरु भएको पार्टीको १५औं संघीय बैठकको उद्घाटन गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।
हत्याकाे विराेधमा प्रदर्शनमा उत्रिदैँ काँग्रेस
सर्लाही । आफ्ना कार्यकर्तालाई गोली हानेर हत्या गरेको विरोधमा काँग्रेसले मलंगवामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । मंगलबार सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच भएको झडपमा गोली चल्दा ५५ वर्षीय रामविलास महतोको मृत्यु भएको थियो ।